Daawo Sawirada: Ceelbuur oo dagaalada ka dhaxashay burbur & barakac | Baydhabo Online
Daawo Sawirada: Ceelbuur oo dagaalada ka dhaxashay burbur & barakac
Is bedelka saddex sano ka hor ku yimid gacan ku haynta Degmada Ceelbuur, ayaa sababay barakac baahsan iyo burbur degmadaasi ka soo gaaray dagaalada ku dhex maray Ciidanka Itoobiya iyo Ururka Al Shabaab
Ururka Al Shabaab, ayaa maalintii Isniinta dib ula wareegay gacan ku haynta Degmada Ceelbuur, ka dib markii ay si kedis ahayd uga baxeen Ciidanka Itoobiya.
Gudoomiyaha Ururka Al Shabaab ugu magacaaban Gobolka Galgaduud, Xasan Yacquub Cali, ayaa sheegay in Degmada Ceelbuur uu ka muuqanayo burbur xoogan, oo ka soo gaaray dagaaladii ay kula galeen Ciidanka Itoobiya.
Gudoomiyaha, ayaa sheegay in ay diyaar u yihiin in dib u dhis ku sameeyan Ceelbuur, isla-markaana aanay waxba u arki doonin burburka xilligan ka muuqanaya, haddiiba ay dib ugala wareegeen Ciidanka Itoobiya, sida uu yiri.
Xasan Yacquub Cali oo la hadlayay warbaahinta afka Shabaabka ku hadasha, ayaa xusay in dadka reer Ceelbuur ay durbaba bilaabeen in ay dib ugu soo noqdaan guryahooda.
Toboneeyo ka mid ah qoysaskii ka barakacay Ceelbuur, ayaa dib ugu soo laabtay, iyagoo la socda dagaal-yahanada Shabaabka. Qoysaskan waxay ka mid yihiin qoysas ay markii horeba barakiciyeen Shabaabku.
Ciidankii Itoobiya ee ka baxay Ceelbuur, ayaa waxaa horey u sii raacay qoysas fara ku tiris ah, oo iyagu ku sugnaa degmadaasi, intii ay dagaaladu ka dhacayeen.